Tantaran'ny fampandrosoana | JiangXi HaiRui Natural Plant Co., Ltd.
Tamin'ny taona 2019 dia nahazo ny fankatoavana ny fifanarahana fanao isan-taona an'ny Ji'an City Market Supervision Administration tamin'ny taona 2018 sy ny mari-pahaizana momba ny laza am-pahibemaso;
Tamin'ny volana jolay 2019, ny vokatra rehetra an'ny Jiangxi Hairui dia nandany tamin'ny fomba ofisialy ny fanamarinana FDA momba ny US Food and Drug Administration.
Tamin'ny volana mey 2019, Jiangxi Hairui dia nanambola tamin'ny fantsom-panafana fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana vaovao 10 taonina amin'ny fitrandrahana zavamaniry teknolojia avo lenta
Nahazo mari-pahaizana momba ny haitao avo lenta amin'ny taona 2019;
Tamin'ny faran'ny 2014-2108 dia nitombo mihoatra ny 50% ny zava-bitan'i Jiangxi Hairui nandritra ny dimy taona nisesy.
Tamin'ny volana aogositra 2018, Jiangxi Hairui no nisoratra anarana voalohany ary nandany ny National Import and Export Credit. Tamin'ny volana Novambra tamin'io taona io ihany, Jiangxi Hairui dia nandefa fangatahana patanty 10 tany amin'ny National Patent Office ary nanaiky izany.
Nandray anjara tamin'ny fampiratiana tamin'ny taona 2018 (Las Vegas Plantation Exhibition, Pakistan Livestock Exhibition).
Tamin'ny taona 2017, Jiangxi Hairui dia nanorim-ponenana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Jiinggangshan Ji'an. Tamin'io taona io ihany, trano birao sy zavamaniry mpamokatra vaovao misy faritra fananganana mihoatra ny 40000 metatra toradroa no nampiasaina.
Tamin'ny 2016, Ji'an Hairui dia nampiditra fitaovana fanandramana menaka zavamaniry matihanina voalohany.
Tamin'ny 2015, ny marika famantarana «Ploti» an'i Ji'an Hairui dia nandany tamin'ny fomba ofisialy ny fanadihadihana ny Biraon'ny mari-barotra an'ny Fitondram-panjakana misahana ny indostria sy ny varotra.
Tamin'ny 2014, nanohy nanapaka ny marika folo tapitrisa yuan ny indostrian'ny varotra an-trano an'i Jiangxi Hairui.
Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2013. Tamin'ny volana desambra tamin'io taona io dia nividy tany indostrialy 1,472 hektara tao amin'ny Jiahua Avenue, faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Ji'an National Jinggangshan.
Tamin'ny taona 2012, ny tanànan'i Qingyuan Distrikan'ny Zhenxing Spice dia nantsoina tamin'ny fomba ofisialy ho Ji'an Hairui Natural Plant Co., Ltd.
Tamin'ny 2010, niforona ny ekipa mpivarotra orinasa iraisam-pirenena ary novolavolaina ny tsena Azia atsimo atsinanana
Hatramin'ny taona 2009, nandray anjara tamin'ny Shanghai CPHI isan-taona izy ho fampiratiana maharitra.
Tamin'ny taona 2008, vokatra 30 mahery no novolavolaina avy amina vokatra mihoatra ny folo izay natsangana tamin'ny voalohany.
Tamin'ny 2006, naorina ny fanadiovan-tsolika Zhenxing Spice Distrikan'i Qingyuan. Tamin'io taona io ihany dia napetraka ihany koa ny ekipa mpivarotra tambajotram-pifandraisana ao Alibaba.